Uthando lweHososcope 2021: Ndiza kulufumana nini uthando? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Uthando lweHososcope 2021: Ndiza kulufumana nini uthando?
Yintoni egcinelwe ubomi bakho bothando ngo-2021? 'Ndiza kumfumana umphefumlo wam?' Ungatshatanga okanye uthathe, lixesha lokuba ufumane uthando lwakho ngehoroscope 2021 ngophawu lwakho lwe-zodiac!
U-2020 usikhuthazile ukuba sithathe ubudlelwane bethu buye kwinqanaba elilandelayo, abanye bethu bade bakhethe umtshato kwaye abanye bade bahlukane. Kulo nyaka nangona kunjalo, iinkwenkwezi ziya kusibongoza ukuba silumke ngakumbi ngeentliziyo zethu kwaye sicinge izinto ngocoselelo phambi kokwenza naziphi na izigqibo. Uthando lukaSusan Taylor lothando lwe-horoscope 2021 lutyhila indlela imiba ethile ebalulekileyo yeplanethi eya kuthi ibone ngayo uninzi lweempawu zodiac eziqhekeke phakathi kothando nokugcina inkululeko yabo. Unyaka ucwangciselwe ukukhwela i-rollercoaster, ke yiya phambili ngokufunda uqikelelo lwakho.
Iimpawu ezininzi ze-zodiac ziya kulwela ukuzibophelela kubudlelwane ngo-2021 kwaye banokuzisola ngokukhetha kwabo ...
Uthando lwehoroscope 2021: Ngaba ndiya kulufumana uthando?
INeptune kwiiPisces iyasikhuthaza jolisa kwicala elilungileyo lolwalamano lwethu kunye nokujonga iimpawu zeqabane lethu. Nangona kunjalo, i-Uranus iya kuhlala ityala imbewu yokuthandabuza kwaye isenze sithandabuze. Phantsi kwempembelelo ISaturn kwisikwere se-Aquarius Uranus eTaurus; eziza kubakho uninzi lonyaka, sinokuthandabuza ukuzibophelela! Abanye abantu abatshatileyo baya kuluphumelela olu vavanyo kwaye abanye baya kuqhekeka, kodwa xa iyonke, siya kulumka ngakumbi kunonyaka ophelileyo.
I-Mercury ngamanye amaxesha isenza sisoyike kwaye IVenus iya kusikhokelela kwiparadesi yolonwabo. IJupiter kwi-Aquarius iya kusityhala ukuba sisebenze kunxibelelwano kubudlelwane bethu kunye nobuhlobo, sikhokelele kunaniselwano oluninzi lwamanzi. Ukusukela phakathi ku-Meyi ukuya esiphelweni kuJulayi, iJupiter kwiPisces iya kuqhumisela ngakumbi ukuthandana, ukuthamba kunye nomnqweno.
- Funda eyakho 2021 horoscope ngolwazi oluthe kratya -
Umhlaza uthanda i-horoscope 2019
'Ndiza kumfumana nini umphefumlo wam?'
Nokuba awutshatanga okanye ulwalamano, sikugubungele ngo-2021 kwaye sikulungele ukutyhila yintoni elindele eyakho uphawu lwe-zodiac kwisebe lothando! Isazi ngeenkwenkwezi uSusan Taylor utyhila yonke into ekufuneka uyazi kwaye nokuba kufuneka uqale ngokugcina kwiiKleenexes!
Uthando olunye ngehoroscope:
Ulwalamano lothando lwehoroscope:
I-Aries + iSagittarius
Taurus + Umhlaza
IGemini + Iintlanzi
Umhlaza + iTaurus
Intombazana + Leo
ILibra + Aquarius
IScorpio + Capricorn
I-Sagittarius + yeeAries
ICapricorn + iScorpio
U-Aquarius + uLibra
- Funda up on Ophiuchus; Uphawu lwe-13 lwe-zodiac -
Ngaba ujonge uthando lokwenene nolonwabo? Nxibelelana nengcali yePsychic ukuze ufumane ulwazi ngakumbi
Ukufumana i-horoscope yakho yemihla ngemihla yasimahla, sayina apha.
Ngoobani ezona mpawu zintle kakhulu zodiac ngothando?
Sonke siphupha ngokuhlala sonwabile kunye nomphefumlo womphefumlo ecaleni kwethu, kodwa izinto azihlali zisebenza njalo ... Ngaba uphawu lwakho lwe-zodiac lunethamsanqa kuthando? Iinkwenkwezi zityhila Ubuntu be-3 obunethamsanqa eluthandweni yiTaurus, Leo kunye nePisces.
Olona thando lukhulu: Ukuqonda:
Baza kufumana iqabane elifanelekileyo ngo-2021.
U-Leo angalindela isicelo somtshato.
3) iintlanzi Uza kudibana nothando lwenene.
Cofa kumqondiso wakho we-zodiac wothando lwakho lwehoroscope 2021!
Ngo-2021 thanda horoscope yeeAries
Izigqibo ezinzima zilindele iiAries
Abahlobo baka-Aries, ngo-2021 uyakuba no Umnqweno onamandla wokubona ubudlelwane bakho buguquka kwaye bukhula. Umendo wakho awuyi kuhlala ulula kwaye ungaphulukana nabantu obakhathaleleyo apha endleleni ngenxa yokungavumelani okuncinci. Nangona kunjalo, uya kwenza umgudu omkhulu kwabo ufuna ukugcina ebomini bakho. Ukuba usebudlelwaneni, iqabane lakho liya kukuncoma nangakumbi ngokuthetha ingqondo yakho kwaye uthethe into oyicingayo. Ukuba awutshatanga, ukuthetha kwakho kuya kukunceda ujike iintloko.
Aries, uya kuthandana nalo nyaka? ❤
Ngo-2021 thanda i-horoscope yeTaurus
Uya kufumana esinye isiqingatha esigqibeleleyo
Ukuqala konyaka kuya kubandakanya i-fireworks engathandekiyo kunokuba ubulindele, kodwa awuyi kuba nexesha lokuphoxeka. Ngo-Matshi, UVenus uya kukunceda wakhe isiseko esomeleleyo kubudlelwane bakho kwaye ukuba awutshatanga, unokubona uthandana kuqala. Ubomi bakho bothando buya kuba yinto ephambili kulo nyaka kwaye uya kufuna ukufumana uthando ngendlela eyiyo. Intliziyo yakho ethambileyo imalunga nokufumanisa iimvakalelo ezintsha obungazi nokuba zikhona!
I-Taurus, ngaba uya kuthandana kulo nyaka? ❤
I-2021 yokuthanda i-horoscope yeGemini
Jonga iMercury ...
Gemini, ngokuqinisekileyo awuzukukruquka bubomi bakho bothando kulo nyaka kwaye sele uza kungena kwinqanaba elihle lokuthandana enkosi kuVenus. Ukuba awutshatanga, ukudibana okutsha kunokwenzeka kwaye Ndide ndikubone uthandana ngokugeza. Kwelinye icala, ukuba usebudlelwaneni, izinto ziya kuba mbi ngakumbi phakathi kwakho, ujonge nokuba kunokwenzeka ukutshata okanye ukuthenga indlu. Eyona nto iphosakeleyo iya kuba kukubuyiselwa kwakhona kweMercury, okuya kuthi kuzise ukungaqondani okuninzi.
Gemini, uya kuthandana kulo nyaka? ❤
2021 Uthando lweenkwenkwezi kwiCancer
Ukuswela uthando kwasekuqaleni
Akunakuphikwa ukuba ukuqala kwe-2021 kuyakubonakala ngathi yinto encinci yothando, nangona kunjalo, musa ukudimazeka ngenxa yokuba ixesha lomdla lilindile. UVenus; Iplanethi yothando iya kongeza oko kukhazimla kakhulu kwimisebenzi yakho yokulala kwaye ubenze babonakale ngathi yimicimbi yothando. Ukuba ungomnye uMhlaza, iMars kunye neVenus ziya kukonyusa ukuzithemba kwakho kwaye zikunike amandla okunyanzelisa ukuba uzibeke apho kwaye ulahlekise. Ngokubanzi, ubomi bakho bothando bujongeka bungenabuntu kwaye buzele yintsimbi yomzuzu wothando kunye nothando.
amaphupha ngokuwa kwamazinyo akho
Umhlaza, ngaba uya kuthandana kulo nyaka? ❤
I-2021 yothando lweenkwenkwezi kuLeo
Kulo nyaka, iVenus kwi-Aquarius ikhuthaza kakhulu ukuba nesisa kubuhlobo bakho kwaye iya kukubona usondela kwiqabane lakho. UJupiter naye uya kukukhuthaza ukuba ucinge malunga nokuzibophelela okunzulu kunye nokubaluleke ngakumbi, njengomtshato. Amaxesha amnandi alindele wena kwaye sowuzakutshintsha ubomi bakho bube ngcono. Ukuba awutshatanga, iMercury iya kukubona udibana nomntu ophawula zonke iikhrayitheriya zakho. Le ntlanganiso ingakhokelela kwinto enzulu phakathi kwenu; kodwa yeyokuba uthathe isigqibo…
Leo, uya kuthandana kulo nyaka? ❤
2021 Uthando lweenkwenkwezi kwiVirgo
Thatha uthando ngokwakho
Ubukho bukaJupiter kumqondiso wakho buya kukwenza ube nomdlandla kwaye ube nethemba ngekamva lolwalamano lwakho kwaye unokukukhuthaza ukuba umise ngokusemthethweni umanyano lwakho. Ukuba uyiVirgo enye, iinkwenkwezi ziya kukusikelela ngazo ukuzithemba okungazange kubonwe ngaphambili ukuba uphume uye kubalahlekisa abo utsaleleke kubo. Ukuba ukhetha ukuzibeka phaya, imeko yobudlelwane bakho inokutshintsha kungekudala emva koko! UVenus yena uya kuthi akhulise inkanuko yakho kwaye akunike incasa yolonwabo kunye nomnqweno wenyama. IVirgo yenye yeempawu zodiacac ezakukhulelwa ngo-2021!
Ntombi, uya kuthandana nonyaka? ❤
2021 Uthando lweenkwenkwezi kwiLibra
Cinga ngeemfuno zakho
Iqela leplanethi e-Aquarius liya kukuthumela ezona vibes zintle nezona zivuthayo. Kwi-2021, bahlobo beLibra, ungalindela ukuba iMars kwiTaurus inyuse ubukrelekrele bakho kunye nenkanuko kwiqabane lakho. ukuba ubuhleli neqabane lakho ixesha elininzi, unokufuna ukujonga emtshatweni kwaye wenze ubudlelwane bakho bube semthethweni ngakumbi. Ukuba awutshatanga, sebenzisa lo nyaka uku yenza into oyifunayo kunye nento ofuna ukuyiphepha. Oko kusithiwa, uxanduva lomsebenzi onokufumana indlela yobomi bakho bothando kwaye luthintele uthando oluhlumayo… Nangona, ngenxa yomsebenzi wakho, ungadibana nomnye umntu ongatshatanga, ongathanda ukumazi!
loluphi uphawu lwam lwangempela lwe zodiac
Libra, uza kuthandana nalo nyaka? ❤
2021 Uthando lwehoroscope yeScorpio
Phinda ulufumane uthando lwakho
Abemi baseScorpio, uzakuqala unyaka ngothando oluhlanyayo lothando kunye neqabane lakho. UMars noVenus baya kukunika onke amandla owafunayo ukwakha ulwalamano olonwabisayo nolungapheliyo, ngokusekwe kumaxabiso asempilweni. Ukuba uziva ukude kwiqabane lakho, iMars kunye neVenus ziya kukunceda uphinde ufumane umhlaba oqhelekileyo kwaye fumana unxibelelwano luqhubeke kwakhona. Ukuba awutshatanga, gcina amehlo akho evulekile kuba umntu othile ukutyumza kwaye ufuna ukuhambisa izinto phambili.
Scorpio, ngaba uya kuthandana kulo nyaka? ❤
2021 Uthando lweenkwenkwezi kwiSagittarius
Hayi unyaka owawunqwenela ...
Nge-Mars kwi-Aries kunye neVenus kumqondiso wakho, uya kuqala unyaka ngokuzithandela kwaye uya kuba nengxaki yokugcina umkhondo woloyiso lwakho. Ungalindela ukuba ubudlelwane bakho buya kuthabathela kwicala lokuqina kunye nobunzima; iimvakalelo onqwenela zona ixesha elide kakhulu. Inkqubo ye- uxinzelelo lokondla usapho lwakho inokungqina kancinci kakhulu kumaxesha kulo nyaka kwaye inokude ikwenze ube nakho. Ukuba awutshatanga, ubuhlobo obudala bunokukhula bube yinto yenyama ngakumbi.
Sagittarius, uya kuthandana kulo nyaka? ❤
I-2021 yothando lwe-Horoscope yeCapricorn
Lindela umdlalo kumanqaku athile
Abemi baseCapricorn, ngaphandle kwamathandabuzo uzive udikidiki kwaye udimazekile luthando okwethutyana ngoku; kunene? Ewe, konke oku malunga nokutshintsha xa uMars engena eTaurus aze akubonise uthando kunye nothando. Kwaye xa uVenus engena kumqondiso wakho, uya kuzifumana ukwamkela ngakumbi iimfuno zeqabane lakho kunye neminqweno yesini. Ukuba awutshatanga, kunokwenzeka ukuba udibane nomntu ohambelana kakhulu naye, nangona ulumke kuba iMercury inokukhokelela kukungaqondani okukhulu kunye noxinzelelo.
Capricorn, ngaba uya kuthandana kulo nyaka? ❤
2021 Uthando lweenkwenkwezi kwi-Aquarius
Izinto zithatha indawo enkulu
Wothandekayo u-Aquarius, zilungiselele iVenus, iSaturn, iJupiter neMercury ukuze uphile ubomi bakho bothando ngo-2021 kwaye ukukhokelele kulonwabo. Kuma-Aquarians angatshatanga phaya, kunokwenzeka udibane nomntu entwasahlobo oyifumeneyo intliziyo yakho ibaleka. Njenge-duo, ulwalamano lwakho luziqinisa luvuyo nemincili. Utyalomali olutsha ngokudibeneyo luya kukuhenda, nokuba kukwishishini lokuzonwabisa okanye kwipropathi. INyanga eNtsha kuLeo inokukwenza unqwenele utshintsho kunye nemiceli mngeni emitsha; Ufuna ntoni na?
U-Aquarius, uya kuthandana kulo nyaka? ❤
2021 Uthando lwehoroscope yePisces
Uthando luya kuthatha indawo entsha
Ngomhla wenyanga kaMatshi iya kuba yinyanga ephambili kubomi bakho bothando kwaye iya kukubona usenza inkqubela phambili enkulu, ngaphandle kobume bakho bobudlelwane. Ukuba uthathiwe, ungalindela ukuba iindaba ezimnandi kuwe kunye neqabane lakho zize zikhukulezele, ngenene izinto bezingenakulunga kuwe! Ukuba ngo-2021 awutshatanga, ukudibana nomntu kunokuguqula ubomi bakho bujongise ezantsi kwaye kukwenze ubuze yonke into. Zilungiselele uku amava ezothando nothando ongazange wazi ngaphambili. Ubhabha phezulu kulo nyaka kwaye unokufikelela kwilifu lomlingo alithoba.
Iipisces, ngaba uya kuthandana nalo nyaka? ❤
Uthando lwehoroscope 2021
Cofa kumqondiso wakho! IiAries ITaurus IGemini Umhlaza Leo Intombazana ILibra IScorpio Isagittarius Capricorn U-Aquarius intlanzi
Ngaba uphawu ngalunye lweZodiac lunokulonakalisa njani ulwalamano lwabo
Uyitsala njani indoda yaseGemini: Menze owakho ngeeNgcebiso zethu
Iimpawu zobuntu zanamhlanje eyindoda
ngu-888 linani elinethamsanqa
ukubhula ngenani 4 kunye no-8
yintoni uphawu lwam lweenkwenkwezi kumhla wokuzalwa kwam
ngowuphi owona mdlalo ungcono kwi-aquarius